Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Matthew 13
Nepali New Revised Version, Matthew 13
1 त्‍यही दिन येशू घरबाट निस्‍केर समुद्रको किनारमा बस्‍नुभयो।
2 अनि यति ठूलो भीड उहाँको नजिक भेला भयो, कि उहाँ डुङ्गामा चढ़ेर बस्‍नुभयो, अनि सबै मानिसहरू किनारमा खड़ा भए।
3 उहाँले तिनीहरूलाई दृष्‍टान्‍तमा धेरै कुरा भन्‍नुभयो। उहाँले भन्‍नुभयो,  “एक जना बीउ छर्ने बीउ छर्न निस्‍क्‍यो।
4  अनि यसरी छर्दा केही बीउ बाटोतिर परे, र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए।
5  केही बीउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे, जहाँ धेरै माटो थिएन, र गहिरो माटो नभएकोले ती छिट्टै उम्रे।
6  तर जब घाम लाग्‍यो ती ओइलाए, र जरा नभएकोले ती सुकिहाले।
7  अरूहरूचाहिँ काँढ़ाहरूका बीचमा परे, तर काँढ़ाहरू बढ़ेर आए र तिनलाई निसासिदिए।
8  अरू बीउ असल जमिनमा परे, र कुनैले सय, कुनैले साठी, कुनैले तीस गुणा फल दिए।
9  जसको कान छ, त्‍यसले सुनोस्‌।”
10 अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, “तपाईं तिनीहरूसँग किन दृष्‍टान्‍तहरूमा बोल्‍नुहुन्‍छ?”
11 उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो,  “तिमीहरूलाई त स्‍वर्ग-राज्‍यका रहस्‍यहरूको ज्ञान दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिइएको छैन।
12  किनकि जससँग छ, त्‍यसलाई दिइनेछ, र त्‍यससँग प्रशस्‍त हुनेछ। तर जससँग छैन, त्‍यससँग भएको पनि त्‍यसबाट खोसिनेछ।
13  यसैकारण म तिनीहरूसँग दृष्‍टान्‍तमा बोल्‍दछु:  ‘किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन्‌, तर देख्‍दैनन्‌,  सुन्‍न त सुन्‍छन्‌, तर सुनेर बुझ्‍दैनन्‌।’
14  यशैयाको अगमवाणी तिनीहरूमा पूरा भएको छ:  ‘सुन्‍न त तिमीहरू सुन्‍छौ, तर कहिल्‍यै बुझ्‍दैनौ,  हेर्न त हेर्छौ, तर कहिल्‍यै देख्‍दैनौ।
15  किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ,  र तिनीहरूका कान बहिरा भएका छन्‌,  र तिनीहरूले आफ्‍ना आँखा बन्‍द गरेका छन्‌,  नत्रता तिनीहरूले आँखाले देख्‍नेथिए,  कानले सुन्‍नेथिए,  हृदयले बुझ्‍नेथिए,  र फर्कनेथिए,  र म तिनीहरूलाई निको पार्नेथिएँ।’
16  तर तिमीहरूका आँखा धन्‍य हुन्‌, किनकि तिनले देख्‍तछन्‌। तिमीहरूका कान धन्‍य हुन्‌, किनकि तिनले सुन्‍छन्‌।
17  साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्न उत्‍कट इच्‍छा गरेथे, तर देखेनन्‌, अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्‍न उत्‍कट इच्‍छा गरेथे, तर सुनेनन्‌।
18  “बीउ छर्नेको दृष्‍टान्‍त सुन।
19  जब कसैले राज्‍यको वचन सुन्‍छ, र सो बुझ्‍दैन, तब दुष्‍ट आउँछ र त्‍यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्‍छ। बाटोतिर छरिएको बीउचाहिँ त्‍यही हो।
20  ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्‍यो हो, जसले वचन सुन्‍ने बित्तिकै खुशीसाथ झट्टै त्‍यो स्‍वीकार गर्दछ।
21  तर त्‍यसको आफ्‍नै जरा नभएकोले त्‍यो थोरै बेर मात्र टिक्‍छ, र वचनको कारणले कष्‍ट कि सतावट परिआउने बित्तिकै त्‍यो पछि हट्‌छ।
22  काँढ़ाहरूमा छरिएको चाहिँ त्‍यो हो, जसले वचन सुन्‍छ, तर यस संसारको फिक्री र धन-सम्‍पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्‍छ, र त्‍यो फल नदिने हुन्‍छ।
23  तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्‍यो हो, जसले वचन सुन्‍छ, र बुझ्‍दछ, र साँच्‍चै फल फलाउँछ। त्‍यसले छरेको बीउबाट सय गुणा, साठी गुणा र तीस गुणा फसल फलाउँछ।”
24 येशूले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्‍टान्‍त सुनाउनुभयो:  “स्‍वर्गको राज्‍य एक जना मानिसजस्‍तो हो, जसले आफ्‍नो खेतमा असल बीउ छर्‍यो।
25  तर मानिसहरू सुतेका बेला उसको शत्रु आयो, र गहूँका बीच-बीचमा सामाहरू छरेर गयो।
26  जब बोट निस्‍केर त्‍यसमा दाना लागे, तब सामा पनि देखा पर्‍यो 
27  “घरका मालिकका कमाराहरूले आएर उसलाई भने, ‘हजूर, के तपाईंले आफ्‍नो खेतमा असल बीउ रोप्‍नुभएको होइन? त्‍यहाँ सामा कहाँबाट आयो?’
28  “घरको मालिकले तिनीहरूलाई भन्‍यो, ‘कुनै शत्रुले यसो गरेको हो।’  कमाराहरूले उसलाई भने, ‘के हामी गएर ती बटुलौं?’
29  “तर उसले भन्‍यो, ‘त्‍यसो नगर, नत्रता तिमीहरूले सामा उखेल्‍दा गहूँसमेत उखेल्नेछौ।
30  फसलको समयसम्‍म दुवैलाई सँगसँगै बढ्‌न देओ। फसलको बेलामा कटनी गर्नेहरूलाई भन्‍नेछु, ‘पहिले सामा उखेलेर जलाउनलाई बिटा बाँध, तर गहूँचाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख’।”
31 येशूले तिनीहरूलाई अर्को दृष्‍टान्‍त भन्‍नुभयो,  “स्‍वर्गको राज्‍य रायोको दानाजस्‍तो हो, जो एक जना मानिसले लगेर आफ्‍नो बारीमा छर्‍यो।
32  त्‍यो सबै बीउहरूमा सानो हुन्‍छ, तर जब बढ्‌छ, तब त्‍यो सबै सागपातहरूभन्‍दा ठूलो हुन्‍छ र रूख नै भइहाल्‍छ। आकाशका चराचुरुङ्गीहरू आएर त्‍यसका हाँगाहरूमा गुँड़ लाउँछन्‌।”
33 उहाँले तिनीहरूलाई अर्को दृष्‍टान्‍त भन्‍नुभयो,  “स्‍वर्गको राज्‍य खमिरजस्‍तो हो, जो एउटी स्‍त्रीले पच्‍चीस किलोग्राम पीठोमा मिसाई, र त्‍यो जम्‍मै खमिरले फुलिएर ठीक नभएसम्‍म त्‍यसलाई एक ठाउँमा राखी।”
34 येशूले यी सबै कुरा मानिसहरूलाई दृष्‍टान्‍तमा भन्‍नुभयो। विनादृष्‍टान्‍त उहाँले तिनीहरूलाई केही पनि भन्‍नुभएन।
35 अगमवक्ताद्वारा यसरी भनिएको वचन पूरा भयो: “म आफ्‍नो मुख दृष्‍टान्‍तहरूमा खोल्‍नेछु, संसारको उत्‍पत्तिदेखि लुकाइराखेका कुरा म जाहेर गर्दछु।”
36 तब उहाँ भीड़लाई छोड़ेर घरमा जानुभयो, र उहाँका चेलाहरूले उहाँकहाँ आएर भने, “खेतको सामाबारे दृष्‍टान्‍तको अर्थ हामीलाई बताइदिनुहोस्‌।”
37 उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो,  “असल बीउ छर्नेचाहिँ मानिसको पुत्र हो।
38  खेत संसार हो। असल बीउचाहिँ राज्‍यको सन्‍तान हो, र सामा दुष्‍टको सन्‍तान हो।
39  सामा रोप्‍ने शत्रुचाहिँ दियाबलस हो। फसलको समयचाहिँ युगको अन्‍त्‍य हो। खेतालाहरू स्‍वर्गदूतहरू हुन्‌।
40  “जसरी सामा उखेलेर आगोमा भस्‍म गरिन्‍छ, युगको अन्‍त्‍यमा पनि त्‍यस्‍तै हुनेछ।
41  मानिसको पुत्रले आफ्‍ना दूतहरू पठाउनेछ, र पाप गर्न लाउने प्रत्‍येक थोक र दुष्‍ट काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्‍यबाट बटुल्‍नेछन्‌,
42  र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्‌। त्‍यहाँ मानिसहरू रुनेछन्‌ र दाह्रा किट्‌नेछन्‌।
43  तब धर्मी जनहरू आफ्‍ना पिताको राज्‍यमा सूर्यजस्‍ता चम्‍किला हुनेछन्‌। जसको कान छ, त्‍यसले सुनोस्‌।
44  “स्‍वर्गको राज्‍य कुनै एउटा खेतमा गाडी राखिएको गाड़धनजस्‍तो हो, जो एक जना मानिसले भेट्टाएर लुकाइराख्‍दछ, र आनन्‍दित भएर ऊ जान्‍छ र आफूसित भएका सबै बेच्‍छ, र त्‍यो खेत किन्‍छ।
45  “फेरि स्‍वर्गको राज्‍य असल मोतीहरू खोज्‍ने एउटा व्‍यापारीजस्‍तो हो।
46  त्‍यसले एउटा बहुमूल्‍य मोती भेट्टाएपछि गएर आफूसँग भएका सबै बेचेर त्‍यो मोती किन्‍यो।
47  “स्‍वर्गको राज्‍य समुद्रमा हानेको एउटा जालजस्‍तो पनि हो, जसमा हरकिसिमका माछाहरू पर्दछन्‌।
48  अनि जाल भरिएपछि मानिसहरूले त्‍यसलाई किनारमा तानी निकाले, र बसेर असल जतिलाई भाँड़ाहरूमा जम्‍मा गरे, र खराब जतिलाई बाहिर फाले।
49  युगको अन्‍त्‍यमा यस्‍तै हुनेछ, स्‍वर्गदूतहरूले आएर दुष्‍टहरूलाई धर्मीहरूका बीचबाट छुट्ट्याउनेछन्‌,
50  र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्‌। त्‍यहाँ मानिसहरू रुनेछन्‌ र दाह्रा किट्‌नेछन्‌।”
51 येशूले सोध्‍नुभयो,  “के तिमीहरूले यी सबै कुरा बुझ्‍यौ?” तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए, “बुझ्‍यौं।”
52 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “यसकारण स्‍वर्गका राज्‍यको शिक्षा पाएको हरेक शास्‍त्री एक जना घरको मालिकजस्‍तो हो, जसले आफ्‍नो ढुकुटीबाट नयाँ र पुराना मूल्‍यवान्‌ सामानहरू बाहिर झिक्‍तछ।”
53 यी दृष्‍टान्‍तहरू बताइसक्‍नुभएपछि येशू त्‍यहाँबाट जानुभयो।
54 अनि आफ्‍नो सहरमा आउनु भएर उहाँले तिनीहरूको सभाघरमा तिनीहरूलाई यस्‍तो शिक्षा दिनुभयो, कि छक्‍क परेर तिनीहरूले भने, “यिनलाई यो बुद्धि र अचम्‍मको काम गर्ने शक्तिहरू कहाँबाट प्राप्‍त भयो?
55 के यिनी सिकर्मीका छोरा होइनन्‌? के यिनकी आमाको नाउँ मरियम, र यिनका भाइहरू याकूब, योसेफ, सिमोन र यहूदा होइनन्‌?
56 के यिनका बहिनीहरू सबै हामीहरूसँगसँगै छैनन्‌ र? त यिनलाई यी सबै कुरा कहाँबाट प्राप्‍त भयो?”
57 अनि तिनीहरू उहाँसँग चिढ़िए। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “अगमवक्तालाई आफ्‍नै निज मुलुक र आफ्‍नै निज घरमा बाहेक अन्‍यत्र सबै ठाउँमा आदर हुन्‍छ।”
58 अनि तिनीहरूको अविश्‍वासले गर्दा उहाँले त्‍यहाँ शक्तिका धेरै कामहरू गर्नुभएन।
Matthew 12 Choose Book & Chapter Matthew 14